အပြောင်းအရွှေ့မလုပ်ရသောနည်းလမ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ယူနိုက်တက်တို့ရေးသားပြုစုထားတယ်လို့ အလှောင်ခံရ | Duwun
လီဗာပူးကစားသမားဟောင်း ရော်ဘီဖောင်လာက ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ နောက်ပိုင်းရာသီတွေမှာ အပြောင်းအရွှေ့ပျက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်၊ အပြောင်းအရွှေ့မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ရေးထားနိုင်တယ်လို့ လှောင်ပြောင်လိုက်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ ဒါဝင်နူနက်ဇ်ကို လီဗာပူးနဲ့အပြိုင်ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့သေးတာပါ။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ကစားသမားက လီဗာပူးကိုပဲ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ယူနိုက်တက်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာ လုပ်ပုံကိုင်ပုံအပေါ် ဖောင်လာက “ကျနော် ရက်ရက်စက်စက်ကြီး မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်က နောက်ပိုင်းနှစ်မှာ အပြောင်းအရွှေ့မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရေးထားလောက်ပါတယ်။ သူတို့က ကစားသမားတွေကိုခေါ်တယ်၊ ဘာလို့လဲ? ပြိုင်ဘက်ဆီ မရောက်စေချင်လို့ပါ”
“နှစ်ခါပြန် ကြည့်လိုက်ပါ။ ရော်နယ်ဒိုက သူလုပ်စရာရှိတာကို ကောင်းကောင်းလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုခေါ်တာ မန်စီးတီးကို ရောက်သွားမှာစိုးလို့ မဟုတ်လား? ပြိုင်ဘက်ဆီရောက်သွားတာကို ကပ်ဘေးသင့်သလိုမျိုး သူတို့ စာအုပ်ထဲထည့်ရေးထားပါလိမ့်မယ်။ ဆန်းချက်ဇ်တုန်းကလည်း အတူတူပါပဲ။ မဟုတ်သေးဘူး၊ ဆန်းချက်ဇ်တုန်းက ဆယ်ဆပိုဆိုးတယ်။ ဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေက သူတို့လုပ်ခဲ့သမျှ အားလုံးမှားနေတယ်ဆိုတာကို ပြနေပါတယ်”
“ဆန်းချက်ဇ်အတွက် တပတ်လုပ်ခ ပေါင် (၅) သိန်း၊ သွင်းဂိုးတဂိုးအတွက် ပေါင်သန်း (၂၀) လောက် သုံးခဲ့ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ယူနိုက်တက်ရဲ့ လစာပေးတဲ့စနစ်ပါ။ တော်တော်ကို ပျက်စီးသွားပါတယ်။ ဂိုးသမားကို တပတ်လုပ်ခ ပေါင် (၄) သိန်းပေးတယ်၊ အသင်းမှာ ပွဲကစားချိန်တဝက်တောင်မရတဲ့ ပေါ့ဘာလိုကစားသမားမျိုးကို လစာတွေ မတန်တဆ စွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်” လို့ ဝေဖန်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။